ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မန်စီးတီး သွင်းဂိုးစံချိန်သစ် ထပ်တင်ဦးမှာလား
27 Nov 2018 . 4:59 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တားမရ၊ ဆီးမရအောင် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ မန်စီးတီးအသင်း သူတို့တင်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုးစံချိန်ကို ဒီရာသီမှာ ထပ်ချိုးဦးမှာလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်။ လက်ရှိ ခြေစွမ်းနဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်အရလည်း မန်စီးတီးအသင်း စံချိန်သစ်တင်ဖို့က ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ရာသီအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ပထမဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့တာက ချယ်လ်ဆီးအသင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီတုန်းက (၁၀၃)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီစံချိန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းက (၁၀၆)ဂိုးနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး အမှတ်(၁၀၀)နဲ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့တာကြောင့် ရမှတ်စံချိန်ပါ တင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပွဲစဉ်(၁၃)ပွဲ ကစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာတင် သူတို့ရဲ့သွင်းဂိုးက ဂိုး(၄၀)အထိ ရှိနေလို့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုးက (၃.၀၇၆)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတယ်။ ဒီပုံစံအတိုင်းသာ ဆက်ထိန်းနိုင်ရင် ရာသီကုန်မှာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးက (၁၁၇)ဂိုးအထိ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကလည်း မန်စီးတီးအသင်းဟာ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက အာဆင်နယ်အသင်းတင်ရှိခဲ့တဲ့ တစ်ရာသီအတွင်း ရှုံးပွဲမရှိ ချန်ပီယံဂုဏ်ပုဒ်ကို ရယူဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။
လက်ရှိခြေစွမ်းအရလည်း မန်စီးတီးကို တားဆီးနိုင်မယ့်အသင်းက လီဗာပူးလ်လောက်သာ ရှိနေပြီး မနှစ်တုန်းကလို မဖြစ်အောင် မန်စီးတီး ကြိုးစားရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မန်စီးတီးအသင်းဟာ ရာသီအစ (၂၂)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ လီဗာပူးလ်နဲ့ပွဲကျမှ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က စံချိန်သစ်များစွာနဲ့ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး ဒီရာသီမှာလည်း ဘယ်လို စံချိန်သစ်တွေနဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . .
Photo:Sport360,Getty Images,The Independent,Reuters UK
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မနျစီးတီး သှငျးဂိုးစံခြိနျသဈ ထပျတငျဦးမှာလား
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တားမရ၊ ဆီးမရအောငျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ မနျစီးတီးအသငျး သူတို့တငျခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုးစံခြိနျကို ဒီရာသီမှာ ထပျခြိုးဦးမှာလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတေယျ။ လကျရှိ ခွစှေမျးနဲ့ တိုကျစဈစှမျးဆောငျရညျအရလညျး မနျစီးတီးအသငျး စံခြိနျသဈတငျဖို့က ရာခိုငျနှုနျးမြားနပေါပွီ။ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ တဈရာသီအတှငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ပထမဆုံး စံခြိနျတငျခဲ့တာက ခယျြလျဆီးအသငျးဖွဈပွီး ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီတုနျးက (၁၀၃)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီစံခြိနျကို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ မနျစီးတီးအသငျးက (၁၀၆)ဂိုးနဲ့ ကြျောဖွတျခဲ့ပွီး အမှတျ(၁၀၀)နဲ့ ဗိုလျစှဲခဲ့တာကွောငျ့ ရမှတျစံခြိနျပါ တငျနိုငျခဲ့တယျ။
ဒီရာသီမှာ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပှဲစဉျ(၁၃)ပှဲ ကစားခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာတငျ သူတို့ရဲ့သှငျးဂိုးက ဂိုး(၄၀)အထိ ရှိနလေို့ တဈပှဲပမျြးမြှသှငျးဂိုးက (၃.၀၇၆)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိနတေယျ။ ဒီပုံစံအတိုငျးသာ ဆကျထိနျးနိုငျရငျ ရာသီကုနျမှာ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ သှငျးဂိုးက (၁၁၇)ဂိုးအထိ ရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုကလညျး မနျစီးတီးအသငျးဟာ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက အာဆငျနယျအသငျးတငျရှိခဲ့တဲ့ တဈရာသီအတှငျး ရှုံးပှဲမရှိ ခနျြပီယံဂုဏျပုဒျကို ရယူဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနပွေီလို့ ဆိုရမယျ။
လကျရှိခွစှေမျးအရလညျး မနျစီးတီးကို တားဆီးနိုငျမယျ့အသငျးက လီဗာပူးလျလောကျသာ ရှိနပွေီး မနှဈတုနျးကလို မဖွဈအောငျ မနျစီးတီး ကွိုးစားရမှာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက မနျစီးတီးအသငျးဟာ ရာသီအစ (၂၂)ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ လီဗာပူးလျနဲ့ပှဲကမြှ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မနှဈက စံခြိနျသဈမြားစှာနဲ့ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး ဒီရာသီမှာလညျး ဘယျလို စံခြိနျသဈတှနေဲ့ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . .